History of the Amazon logo | Famoronana an-tserasera
Ny famoronana sy ny famolavolana marika dia tsy noforonina ao anatin'ny iray andro. Izy ireo dia ahitana dingana famoronana lava, izay tsy maintsy raisina ny lafin-javatra rehetra. Noho izany, zava-dehibe ny amin'ny famolavolana na fanavaozana ny marika iray, na dia ny antsipiriany kely indrindra aza dia raisina an-tsaina. Ohatra mazava amin'izany dia: Amazon.
Nanova ny fango im-betsaka ny orinasa e-varotra amerikana, mandra-pahatongan'ilay fantatra ankehitriny. Nahavita nifanaraka tamin'ny fanovana sy ny filozofia marika i Amazon, miaraka amin'ny logo azo fantarina. Ary izany, indraindray dia tsy ilaina ny manana logo sarotra. Amazon dia ohatra mazava amin'ny maha-zava-dehibe ny fampifanarahana ny sainao mifototra amin'ny hetsika. Eto izahay dia milaza aminao ny tantara sy ny dikan'ny marika Amazon, mandra-pahatonganay amin'ilay ananany amin'izao fotoana izao.
1 Tantara sy ny dikan'ny logo Amazon
1.1 Taona 1995
1.2 Taona 1997
1.3 Taona 1998
1.4 Taona 2000
2 sanda logo
Tantara sy ny dikan'ny logo Amazon
Amazon dia noforonina ho tranokala fivarotana boky, miaraka amin'ity orinasa ity dia teraka ny famantarana voalohany an'ny orinasa. Rehefa noforonina ny logo Amazon, Jeff Bezos dia naniry ny ho minimalista amin'ny endrika fitahirizana tetibola. Raha ny fahitana azy dia nandeha tsara ny hetsika ka tsy nisy fiantraikany tamin'ny mombamomba ny marika, fantatra manerana ny planeta amin'izao fotoana izao. Ny famantarana voalohany an'ny orinasa dia noforonin'i Turner Duckworth tamin'ny 1995. Ny logo dia misy ny litera "A" miaraka amin'ny tranokala Amazon eo ambaniny amin'ny endritsoratra sans-serif mainty. Ho setrin'izany, ny endriky ny Reniranon'i Amazonia dia nizara ny litera "A". Miaraka amin'ity vokatra mampitony ity dia naniry ny hanasongadinana ny fivarotana izy ireo.
Roa taona taty aoriana, navaozina ny logo voalohany. Nanampy tsipika mitsivalana izay nivoaka tamin'ny fomba namerenana ny Reniranon'i Amazonia izy ireo. Miaraka amin'ity endrika vaovao ity, ny logo dia nitovy tamin'ny hazo. Mbola tsy nisy loko ny logo. Raha ny momba ny marika dia nanjary kely kokoa.
Tamin'ny 1998 vao nanomboka nitombo be i Amazon. Nampiana vokatra vaovao ny fivarotana, toy ny boky sy mozika, ankoatra ny hafa. Ny fiovan'ny logo dia naniry haneho an'io tolotra vokatra io. Logos telo samihafa no noforonina. Voalohany indrindra, nesorina tsotra izao ny mariky ny Reniranon'i Amazonia ary namela ny marika miaraka amin'ny karazana serif, lasa logo ary nanampy teny filamatra hafa "Ny fivarotam-boky lehibe indrindra eto an-tany". Tsy naharitra ela ity logo ity fa nosoloina dikan-teny misy loko vaovao: mavo.
Ankehitriny dia lasa lehibe ny litera amin'ny logo, ary mavo ny litera "O". Nanjavona indray ilay marika. Ao amin'ny dikan-teny farany, dia afaka mahita logo tanora kokoa sy maoderina kokoa isika, miaraka amin'ny anarana marika "Amazon.com" ary tsipika mavo eo ambaniny. Nisy fiolahana miakatra kely io tsipika io. Amin'ity andalana ity dia te-hisolo tena ny hevitra momba ny tetezana izy ireo, mampifandray ny lasa amin'ny ho avy.
Ny logo Amazona araka ny fantatra dia noforonina 20 taona mahery lasa izay. Izy io dia lasa tandindon'ny orinasa vaovao. Amin'izao fotoana izao, ny logo dia voaforona amin'ny teny marika "Amazon", izay misy litera kely. Mbola mahita tsipika mavo ianao, fa amin'ity indray mitoraka ity dia miendrika zana-tsipìka. Izany dia mifandray amin'ny litera "A" sy "Z". Ny safidy amin'ny loko dia miaraka amin'ny zana-tsipìka amin'ny endriky ny tsiky, izay manasongadina bebe kokoa ny maha-tanora sy tsara ny marika.
Ny logo izay fantatsika rehetra ankehitriny dia natao tamin'ny taona 2000 ary nanjary mariky ny taranaka vaovao sy ny fandrosoana ara-teknolojia. Ny endrika dia nofidin'ny sehatra e-varotra lehibe indrindra, maneho ny fomba fiasany tsara sy mandroso.
Na izany aza, niahiahy momba ny vidin'ny fonosana i Jeff Bezos. Naleony nitsitsy tamin'ny famolavolana singa hafa. Noho izany Duckworth dia nisafidy ny tsy hampiasa afa-tsy ny tsiky mba hamantarana ireo boaty fandefasana. Mamorona boaty mitsiky, izay indray mandeha ho toy ny paikady ara-barotra.
Fandikana izay nomen'i Bezos ny logo-ny, Misy ifandraisany amin'ny karazan-tsakafo maro be izay tiany hananana ny fivarotany tamin'izany fotoana izany. Noho izany antony izany dia manana zana-tsipìka manomboka amin'ny litera "A" ary mifarana amin'ny "Z" ny logo. Io zana-tsipìka tsotra io dia mampifandray ireo vokatra rehetra amidy amin'ny Amazon. Raha mijery akaiky ianao dia ho hitanao fa miendrika tsiky ilay daty.
Raha ny typography ampiasain'ny Amazon dia azo lazaina fa sady tsy sérieux loatra no tsy tsotsotra loatra, dia eo afovoany. Mikasika ny safidin'ny loko mainty, voasary ary fotsy, dia azo lazaina fa ny mainty dia nofinidy tamin'ny fikasana hampita ny fahamboniana sy ny fanaraha-maso eo amin'ny tsenan'ny varotra. Manampy hery sy fahasambarana ny Orange, sady manampy loko mainty ary tsy dia matotra loatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Tantaran'ny logo Amazon